DHEGEYSO: Cabsida hoos u dhac dhaqaale oo sii kordhaysa (Maxaa dhacay?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Cabsida hoos u dhac dhaqaale oo sii kordhaysa (Maxaa dhacay?)
DHEGEYSO: Cabsida hoos u dhac dhaqaale oo sii kordhaysa (Maxaa dhacay?)
(Stockholm) 09 Okt 2019 – Saadaal cusub oo hadda soo baxday ayaa sheegaysa inay dhamaadeen waayihii kobaca dhaqaale ee Sweden, kaasoo haatan bilaabay hoos u dhac, sida ku cad daraasad uu sameeyay Machadka Qaranka ee Daraasaadka Dhaqaalaha KI, oo maanta lasoo bandhigay.
Koritaanka dhaqaalaha Sweden ayaa sanadkan noqday 1.2% oo qura, taasoo wax badan ka yar sanadkii hore oo uu dhaqaaluhu kobcay 2.3%. Waxay taasi ka dhigan tahay inay shaqa la’aantu kordhi doonto, sida uu sheegayo Urban Hansson Brusewitz oo ah Maareeyaha Guud ee KI.
– Way caddahay inuu xowliga kobaca dhaqaaluhu awood beelayo, gaar ahaan warshadaha iyo kolka laga hadleyo suuqa shaqada oo xilligii kuleeylaha ay muuqatay hoos u dhac ballaaran. Mahan warshadaha oo keliya, hase yeeshee u badan, ayuu yiri.
Taasi waxay la micne tahay inuu hoobad ku jiro kobaca dhaqaalaha Sweden, balse weli dood baa ka taagan in si rasmi ah loogu dhawaaqi karo hoos u dhac dhaqaale oo toos ah, sida uu qabo isla Urban Hansson Brusewitz.
– Ma aha weli muuqaal sidaa u cad cad, balse haddii aaney dhicin waxyaabo kale oo aan la jecleeysan, sida duruufaha Brexit bilaa heshiis ah, iyo haddii uu sii laxaadsado dagaalka ganacsi ee haatan socda ee tariifooyinka la dallacayo, waa dhici karta inuu dhaqaaluhu hoos u dhoco iyo inuu kobco intaba, ayuu raaciyay.
Si kastaba, sicir bararka hooseeya iyo shaqa la’aanta sii kordhaysa ayaa keenaysa in Bankiga Dhexe ee Sweden aanu kordhinin heerka dulsaarka sanadkan iyo xitaa kan xiga ee 2020, sida uu sheegayo machadka KI.
Heerka shaqa la’aanta Sweden ayaa la filayaa inay cagacagayso ama gaarto ilaa 7.1%.
Previous article”Kenya ha iska jirto inay Somalia ku qabsato sidii Sucuudiga ku qabsatay Yaman!”
Next articleNooc naasaha ka mid ah oo ay adag tahay in laga baaro kansarka naasaha (Waa noocee?)